Saamaynta Saamaynta: Wadaagga, Wadajirka, Warbaahinta iyo Maareynta Tag | Martech Zone
Saamaynta Radius awood u leh noocyada dijitaalka ah iyo hay'adaha si ay u weyneeyaan soo celinta xayeysiiska guud ahaan kanaallada dhijitaalka ah, mobilada iyo khadadka. Tikniyoolajiyadooda suuq geynta SaaS waxay u suurta galisaa suuqleyda inay yeeshaan hal keli Analytics u fiirso dhammaan dadaalada suuq-geynta adoo aruurinaya xogta safarka macaamiisha ee alaabada yar yar iyo qiimaha suuqgeynta.
Suugaanta Saamaynta Saamaynta ee Alaabooyinka waxaa ka mid ah
Maamulaha Lamaanaha - qalabayn iskuduwahaaga iyo barnaamijyada lammaanaha istiraatiijiga ah. Iska yaree khidmadahaaga macaamilka oo kor u qaad ROI adigoo xoojinaya qiyaasta, fikradaha falanqaynta, iyo xakamaynta.
Maareeyaha Tag - tag tag maaraynta dhammaan kanaallada - oo ay ku jiraan moobiilku.
Maareeyaha Media - xarun xog-ururin oo loogu talagalay hagaajinta ka-warbixinta dhowrka kanaal iyo helitaanka aragti ku saabsan qiimaha ay soo kordhisay ilo kasta, oo si sax ah loo cabbiro ku soo noqo xayeysiinta (ROAS).
Raadraac App App - Isku dar hal SDK oo si sax ah ula soco dhammaan rakibidda moobiilka iyo munaasabadaha ku-jira abka ee dhammaan wada-hawlgalayaasha.
Soo-galootiga Call Inbound - Lasoco dhamaan howlaha wicitaanka soo galida sida dhagsiinta, hal madal. Automate qulqulka shaqada, oo ay kujirto qandaraas wadaaga iyo lacag bixinta.
Suuqa - hel oo ku xir xayeysiisyada lala xiriiriyo algorithm raadinta 'Impact Radius'.
Iyada oo loo marayo otomaatigga hababka suuqgeynta muhiimka ah iyo bixinta waqtiga-dhabta ah ee aragtida muuqaalka muuqaalka ah, Saamaynta Radius wuxuu dakhliga kaxeeyaa shirkadaha caalamiga ah sida American Airlines, Cabela's, Shutterstock, Tommy Hilfiger iyo Wayfair.
Tags: maaraynta gacansaarkamadal suuq raac ahmadal raacsanmadal suuq geynta wakaaladamadal hay'adeedsuuqgeynta kanaalkagacan gacantracker wicitaan gudaha ahmaareeyaha warbaahintatracker app mobilemaaraynta lamaanahamaamulaha lamaanahaku soo noqo xayeysiintarosassaasmaaraynta tagmaareeyaha tag
Postano 2.5: Ku darista Hal-abuurka iyo U-habeynta Muuqaalka Muuqaalka Bulshada
Sep 20, 2016 at 11: 40 PM
Ha aaminin barnaamijkan suuqgeynta ku xiran. Waxaan u gudbiyay milkiilaha degelka inuu ku iibsado qorshe MaxCDN ah waxaanan kasbaday guddi la bixin karo 3 bilood. Waxaan ku dhammeystiray dhammaan foomamka loo baahan yahay shirkadda MaxCDN ee suuqgeynta suuqgeynta ee 'Impact Radius' 3 bilood ka hor inta aan la bixin. Waxaan u qoondeeyay dakhligayga si aan u bixiyo biilasha. 3 bilood ka dib markii lacagta la bixinayo, kooxdooda maaliyaddu waxay soo saareen arrin ku saabsan in lambarkayga wadadu aanu ansax ahayn. Maxay tahay sababta arintan lambarka wadista aan looga hadlin 3 bilood ka hor halkaasoo looga hortagi lahaa dib u dhaca bixinta. Maxaan u kiciyay arintaas markaan filanayo lacagtii aan kasbaday inay si xun u bixiso biilashayda? Tani waxay si cad u tahay cillad / dayacaad qayb ka mid ah nidaamka Raadiyaha Saamaynta. Waxaan la dooday 2 todobaad macaamiishooda, waxaan kula taliyay inay adeegsadaan habab kala duwan oo loo yaqaano inay ka shaqeeyaan koontadayda waxayna gaadhay heer aan la xiriiray madaxda Raadiyaha 'Impact Radius' oo aanan weligood jawaab ka helin. Waxaan sidoo kale si toos ah ula xiriiray MaxCDN iyo madaxooda si aan u waydiiyo caawintooda madaama aan horeba u dhamays tiray dhamaan xulashooyinka aan kuhaysto Raadiyaha Saamaynta, durba waan lumiyey kalsoonidii aan ku qabay iyaga iyo la macaamilkoodana waxay isiiyaan culeys badan. Marnaba caawimaad kama helin MaxCDN. Dadaalladaas oo dhan, waqti uun baa iga lumay oo culeys badan baa i siiyay. Anigana lacag ayaan ku lumiyay ciqaabtii bixinta qarashka oo daahay awgeed. Khaladkaygu wuxuu ahaa waxaan ku aaminay inay bixin doonaan.
Sep 20, 2016 at 11: 44 PM
Waxay umuuqataa inay u adeegsan karaan ansaxinta hubinta hawshooda, laakiin ma hubo inaan u gudbi doono ilaa iyo intaan dhahayo inaysan aamin ahayn markii aad soo gashay macluumaadka marinka khaldan. Waan la shaqeynay mana aanan arkin isku arrin.